Iyo inonyanya kufarirwa mitambo ye retrogamers | IPhone nhau
Carmen rodriguez | | IPhone maapplication
Yekutanga mitambo yemavhidhiyo yakauya pachena muma 70s, asi arcade michina ndiyo yaive iyo vakavarumbidza muma80s nema90s. Iko kushanduka kwemitambo yemavhidhiyo kunozivikanwa kune wese munhu, handifunge kuti pane chero munhu akasara asina kumbobvira atamba Nintendo, Play Station, XBox, Wii, nezvimwe.
Kune vanoda avo avo ekutanga mavhidhiyo emavhidhiyo mafoni emhando yepamusoro akachengetedzwa uye akashandurwa, pano ndinokuunzira dzimwe dzadzo dzakateverwa zvakanyanya, nevaya vava kudaidzwa vanodzosera.
4 Kaviri Dhiragoni Trilogy
6 Zvipoko zveGhosts'n
7 Mega murume x
8 Simbi Slug
10 Muchinda wePezhiya
14 Chakavanzika cheMonkey Island
Ndiwo mutambo wevhidhiyo weArcade wakagadzirwa naTaito mukati 1986. Iyo yakavakirwa paAtari Kubhuroka kwema 70s.Mutambi anodzora diki chikuva, chinozivikanwa se «Spacehip Akasiyana", chii inodzivirira bhora kubva mukusiya nzvimbo yekutamba, ichikonzera kubhowa. Pamusoro pane «zvidhinha"Kana"zvinogumbura«, Ndeipi inonyangarika kana yabatwa nebhora. Kana pasina zvidhinha zvasara, mutambi anoenda padanho rinotevera, panowoneka imwe bhuroko remabhuroko.
Mutambo wevhidhiyo yemota wakagadzirwa mukati 1997 iyo yakamira kunze kusanganisira a huwandu hwakakura hwechisimba mumutambo wavo wemutambo. Chinangwa chikuru chemutambo kupedzisa mujaho kana kuparadza mota dzinopesana, zvisinei, kumhanya pamusoro pevanofamba netsoka chinhu chinokurudzira. Munguva yake akatambura kushoropodzwa zvine hukasha izvo zvakamushamisa kumuendesa kunzvimbo dzepamusoro dzekutengesa.
Mutambo ndewe zvichibva pabhaisikopo kubva muna 1975 director Paul Bartel, Rufu Race 2000, iyo yakaiswa nyeredzi ne Sylvester Stallone y David carradine.
Yakaburitswa mune yayo arcade vhezheni mukati 1999 uye yeRotocast muna 2000, gare gare yaive yakashandurwa yePlayStation 2 uye GameCube consoles uye yePC muna 2001.
Mutambi anogona kusarudza kubva kune mana evatyairi vematekisi (Axel, BD Joe, Gena naGus) kuenda simudza vanhu ugoenda navo uko kunonongedzera museve nguva isati yapera. Mukuita, iwe unogona kuwana mari nekuita matambiro, senge kufambidzana nedzimwe mota.
Kaviri Dhiragoni Trilogy
Iyo saga yakatanga mu arcades ne Dhiragoni Dhaviri yekutanga kubva 1987. Iwo mutambo wevhidhiyo wekare weiyo beat 'em up genre, yakatanga kugadzirwa neTechnos Japan. Mutambo waive wakanaka zvombo zvemuartial, kunyanya ne Bruce Lee, seOperation Joka; uye iyo post-apocalyptic marongero anoenderana neakakurumbira anime Fist yeNorth Star.
Kaviri Dhiragoni Trilogy2,99 €
Mutambo saga nyeredzi mapatya Billy naJimmy Lee, vari vadzidzi vengano yekunyepedzera yekurwa inonzi Sōsetsuken, panguva imwechete yavanorwa nevadzivisi vakasiyana siyana nevakwikwidzi. Dhiragoni Dhaviri yaive nemateedzero mazhinji neshanduro pazvinyaradzo zvakasiyana. Kutenda kufarirwa kwesaga, kwaive zvakare neanoratidza terevhizheni nhepfenyuro.
Ndiwo mutambo wevhidhiyo we munhu wekutanga kupfura (FSP) mukati 3D, Yakagadziriswa uye yakaparadzirwa ne3D Realms mu 1996.
Kupesana nemavhidhiyo mitambo yeiyo genre inotangira iyo, mu Duke Nukem 3D unogona kuona akasiyana akasiyana mazinga, iyo inosanganisira nzvimbo dzakashama uye mhepo kubva mumigwagwa kusvika kumaguta akanyudzwa kana nzvimbo dzemuchadenga. Pamusoro pezvo, aya mazinga haana kukura kwakazara, kune huwandu hwakawanda hwemakoko nemakwenzi, izvo zvinoita kuti zvive inokwezva kwazvo kune vakawanda.
Yakadudzirwa se Zvipoko nezvidhoma, Arcade platformer vhidhiyo mutambo wakagadzirwa naCapcom on 1985. Mutambi anotonga a caballeroakadanwa Sir Arthur, uyo anokwanisa kukanda mapfumo, mapanga, mazhenje, masanhu uye zvimwe zvombo zvaanofanira kushandisa nazvo kukunda zombies, madhimoni nezvimwe zvisikwa zvinopisa kuitira kununura mwanasikana wamambo.
Mega murume x
Ndiwo mutambo wevhidhiyo wakagadzirwa mukati 1993 naCapcom, ndiyo yekutanga yevhidhiyo mutambo we akateedzana Mega murume x y yakasikwa zvakanyanya sedombo rekutsika kuenda kufambira mberi kubva kumitambo yemavhidhiyo yeMega Man kubva kuNES kuenda kuSuper Nintendo.
MEGA MURUME X4,99 €
Chirevo chiri bvisa masikirini masere nemaboss avo (kuwana zvombo zvavo semasimba), kuti vapfuure matatu kana mana ekuwedzera masikirini anotungamira kune wekupedzisira boss. Pane yega yega skrini pane zvimwe zvinhu zvakapararira, izvo kazhinji kazhinji, zvinongowanikwa chete nemasimba anowanikwa kubva kune apfuura skrini.
Iwo mutambo wevhidhiyo nhevedzano na mhanya uye pfuti mhando yakatanga kuburitswa paNeo-Geo arcade michina uye mitambo yemitambo yakagadzirwa neSNK. Mutambo wakanyanya anozivikanwa nekunzwa kwake kuseka uye akagadzirwa nemaoko, ndosaka ichionekwa seimwe yeakanakisa uye akatanhamara akateedzana erudzi rwayo.
METAL hozhwe 12,99 €
Nyaya yacho inoitika muna2008 zvichienda mberi, uko kwakashevedzwa boka rine zvombo Peregrine Falcon Chikwata (Peregrin falcons) inofanirwa kutadzisa kuyedza inotarisirwa naGeneral Morden, mutungamiri weRebel Army uye akateedzana 'mukuru anopikisa.
Ndiwo mutambo wevhidhiyo weArcade wakagadzirwa nemuvhidhiyo dhizaini Toru Iwatani wekambani yeNamco uye akagovaniswa pakutanga kwemakore 1980. Yakave chiitiko chepasirese muindasitiri yemitambo yevhidhiyo, yakasvika pakuve neiyo Guinness Rekodhi Yeakanyanya Kubudirira Arcade Vhidhiyo Game Yese-nguva iine mazana makumi maviri nematatu nemakumi masere nemaviri emachina akatengeswa kubva 293.822 kusvika 1981.
Musoro wekare we yero chipoko-chinodya hunhu, paanopfuura nemumazaya.
Pakutanga yakaburitswa yeApple II mu 1989. Nyaya yacho inoitika kana Sultan ari kure neumambo hwake achitungamira hondo. Iyo inguva yakakodzera kune yakaipa vizier Jaffar kuyedza kutora simba. Kuzviita inobata mwanasikana wamambo. Iyo protagonist mudiki mushanyi kubva kunyika iri kure, uye rudo rwechokwadi rwemuchindakadzi. Asi akakandwa mugomba rejeri uye zvino unofanira kutiza nguva yakapihwa naJaffar isati yazadzikiswa kumwanasikana wamambo, kusarudza kuti womuroora here uye kuti umusunungure.
Mutambo une maviri-mativi maonero. Chiito chinobudikira kubva kudivi rekuona. Iko hakuna skrini yekutsikisa (kutsikisa).
Iko kuenderera kwe Street Fighter. Mutambo wekutanga mune akateedzana Street Fighter kuzadzisa mukurumbira wepasirese uye muvambi wechiitiko chemitambo yemavhidhiyo mu kurwisa mhando. Yakagadzirwa nekambani yeCapcom. Yakaonekwa munhandare munaKurume 1991 muJapan, uye nekukasira iyo yepasi rose.
Ane Mavara gumi nemasere aunosarudza kubva, mana ekupedzisira maboss uye akasiyana magumo eumwe neumwe hunhu. Nekudaro, yaive nehutongi iyo, kufanana neyakatangira, inoshandisa mubatanidzwa weiyo lever uye mabhatani matanhatu kuita kurwisa kwakakosha panguva yehondo, sekukanda fireballs kana «dragonpunch»Saka kuteedzera mumitambo yakavatevera.
Mugore 1989 yevhidhiyo kambani yemitambo Nintendo yakaburitsa mutambo wevhidhiyo Super Mario Bros, mutambo uyu wakakurumbira zvekuti Sega akamanikidzwa kuumba hunhu kukwikwidza naNintendo, saka Alex Kidd akagadzirwa, zvinova zvakakundikana nekuti hazvina kusangana nezvakatarisirwa nevateveri. Saka mugadziri wemavhidhiyo dhizaini Yuji naka akagadzira hunhu Sonic ari tyoni uye ini ndinovhura eponymous vhidhiyo mutambo mu 1991.
Sonic iyo Hedgehog ™ Yakajekavakasununguka
Race pamheni inomhanya kuburikidza nematanhatu enzvimbo dzenharaunda neSonic iyo Hedgehog. Mhanya uye umonyanise kuburikidza nezvishwe izvo iwe unowana Mhete uye unokunda vavengi vako pane chako basa kuponesa nyika kubva kune yakaipa Dr. Eggman.
Tetris (ChiRussian: Те́трис) mutambo wepikicha wevhidhiyo pakutanga wakagadzirwa uye kurongedzwa na Alexey Pazhitnov, yakaburitswa muna Chikumi 06, 1984. Mutambo unowana zita rawo kubva muchiGiriki chekutanga nhamba tetra, sezvo zvidimbu zvese zvemutambo, zvinozivikanwa seTetrominos, zvine zvikamu zvina.
Mutambi haakwanise kudzivirira kudonha kwetetrominos, asi inogona kusarudza kutenderera chikamu (0 °, 90 °, 180 °, 270 °) uye inofanira kuwira kupi. Kana tambo yakatwasuka yapera, mutsetse iwoyo unonyangarika uye zvidimbu zvese zviri pamusoro zvinodzika pasi chinzvimbo chimwe, kusunungura kutamba nzvimbo uye nekudaro zvichiita kuti basa rekuisa zvidimbu zvitsva.
Chakavanzika cheMonkey Island
Ndicho ushingi grafu Inogoneswa ne LucasFilm Games en 1990 uko nyaya dzevapirati dzakafananidzwa, kugadzira nyika yekuseka iyo yakachinjisa mhando.
Mutambo unotanga pachitsuwa cheCaribbean cheMêlée, kupi murume wechidiki anonzi Guybrush Threepwood anoda kuve pirate. Kuti aite izvi, anotsvaga vatungamiriri vevapirati, vanomupa matambudziko matatu kuva pirate: kukunda Carla, muridzi wemba, mune duel yeminondo nekutuka; kuba chifananidzo kubva kuimba yaGavhuna; uye uwane pfuma yakavigwa.
Ndiwo mutambo wevhidhiyo we munhu wekutanga kupfura iyo yakakurudzira rudzi rwePC. Yakagadzirwa neId Software uye ndokuparadzirwa naApogee Software muna Chivabvu 1992. Uyu mutambo yaive piyona mumhando yayo.
Wolfenstein 3D Classic Platinum1,99 €
Mutambi ndiWilliam J. Blazkowicz, un spy american kuyedza tiza kubva kunazi nhare maari musungwa. Chivako ichi chine huwandu hukuru hwemakamuri epachivande ane hupfumi, chikafu chekudya uye zvekutanga zvekubatsira, pamwe nemhando dzakasiyana dzezvombo uye zvombo, zvese izvi zvichabatsira mutambi kuzadzisa chinangwa chavo.
Sezvo katsamba kune vatambi, unogona kutarisa iyo runyorwa rwemitambo yemavhidhiyo inotengeswa zvakanyanya mu la VGChartz Game Dhatabhesi
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo inonyanya kufarirwa mitambo ye retrogamers
Uye ivo vanowanzo kuve "vanodhura" kutora mukana wehukasha hwedu !! Chakaipa chakaipa
Pindura kuna Alberitotu
Ini ndinobvumirana zvachose newe ... asi ini handina kukwanisa kuramba kuti ndive neanopfuura imwe pane yangu iPhone kani.
Zvirimwa vs Zombies 2 inovandudzwa nemamwe mazinga uye mafaro
Muzambiringa uchabvisa mavhidhiyo ezvinonyadzisira